Izindaba - Umehluko phakathi kwe-sphygmomanometer yezokwelapha ne-sphygmomanometer yasendlini
Sibutsetelo se-sphygmomanometer ye-elektroniki
I-sphygmomanometer ye-elekthronikhi iyisetshenziswa sezokwelapha esisebenzisa ubuchwepheshe besimanje be-elekthronikhi kanye nomgomo wokulinganisa umfutho wegazi ongaqondile ukukala umfutho wegazi. Isakhiwo sakhiwa ikakhulukazi izinzwa zengcindezi, amaphampu omoya, amasekethe wokulinganisa, amakhokho nezinye izinto; ngokwezikhundla ezahlukahlukene zokulinganisa, kukhona ikakhulukazi uhlobo lwengalo, Kunezinhlobo eziningana zohlobo lwesihlakala, uhlobo lwedeskithophu nohlobo lokubuka.
Indlela yokulinganisa ingcindezi yegazi engaqondile ihlukaniswe ngendlela ye-auscultation (Korotkoff-Sound) kanye nendlela ye-oscillometric.
a. Njengoba indlela ye-auscultation igcwaliswa ngokusebenza kanye nokuvuselelwa kukadokotela, inani elilinganisiwe lithinteka kalula yizici ezilandelayo:
Udokotela kufanele njalo abheke izinguquko ze-mercury pressure gauge lapho elalela umsindo. Ngoba ukusabela kwabantu kwehlukile, kukhona igebe elithile ekufundeni inani lomfutho wegazi;
Odokotela abehlukene banezindlebe nokuxazululwa okungafani, futhi kukhona umehluko ekubandlululweni kwemisindo yeKorotkoff;
Ijubane le-deflation linomthelela ngqo ekufundweni. Ijubane le-deflation standard elijwayelekile liyi-3 ～ 5mmHg ngomzuzwana, kepha abanye odokotela bavame ukukhipha igesi ngokushesha, okuthinta ukunemba kwesilinganiso;
Ngokuya ngobungcweti bokusebenza komtholampilo, izici ezinkulu zokuzimisela komuntu siqu ezingeni le-mercury, izinga elingazinzile lokwehla kwemali, ukuthi unganquma kanjani amanani we-systolic and dilatational pressure (umsindo wesine noma wesihlanu womsindo weKorotkoff usetshenziswa njengomgomo, Okwamanje impikiswano yomtholampilo isenkulu, futhi asikho isiphetho sokugcina), nezinye izinto ezinamaphutha ezizimele ezithinteka ngochungechunge lwezinto ezinjengokuthinta imizwa, ukuzwa, umsindo wezemvelo, kanye nokungezwani kwezihloko, okuholela ekuthintekeni kwedatha yomfutho wegazi olinganiswa ngendlela yokuthokozisa ngezinto ezizimele Ezinkulu, kukhona ukushiyeka okungokwemvelo kwephutha elikhulu lokubandlululwa nokuphindeka okuncane.
b. Yize i-sphygmomanometer ye-elektroniki eyenziwe kumgomo wokuthokozisa ikwazile ukuthola ukutholwa okuzenzakalelayo, ayikakuxazululi ngokuphelele ukushiyeka kwayo okungokwemvelo.
c. Ukuze kuncishiswe inkinga yamaphutha amakhulu adalwe yizinto ezizimele ezibangelwa i-auscultation sphygmomanometer, nokunciphisa ithonya lokusebenza kwabasebenzi, ama-othomathikhi e-elektroniki ama-sphygmomanometer kanye nabaqaphi bomfutho wegazi abalinganisa ngokungaqondile umfutho wegazi lomuntu usebenzisa indlela ye-oscillometric. Umgomo oyinhloko ngukuthi: faka ngokuzenzakalelayo ikhefu, bese uqala ukwehlisa ingcindezi ethile. Lapho umfutho womoya ufinyelela ezingeni elithile, ukugeleza kwegazi kungadlula emthanjeni wegazi, bese kuba khona igagasi elithile elithusayo, elisakazeka ngodoti lize liye kwinzwa yengcindezi emshinini. Inzwa yengcindezi ingabona ingcindezi nokushintshashintsha kwenqola elinganisiwe ngesikhathi sangempela. Kancane kancane, igagasi le-oscillation liya likhula futhi likhule. Ukwehla kwamandla emali kabusha Lapho ukuxhumana okukhona phakathi kwekhafu nengalo kuya ngokuya kukhululeka, ingcindezi nokushintshashintsha okutholwe inzwa yengcindezi kuya ngokuya kuncipha. Khetha umzuzu wokuguquguquka okuphezulu njengephoyinti lesithenjwa (ingcindezi emaphakathi), ngokususelwa kuleli phuzu, lindela iphuzu lokuguquguquka eliphakeme lika-0.45, okuyi-systolic blood pressure (umfutho ophakeme), bese ubheka emuva ukuthola iphuzu lokuguquguquka eliphakeme lika-0.75 , leli phuzu Ingcindezi ehambisanayo ingcindezi le-diastolic (ingcindezi ephansi), kanti ingcindezi ehambelana nephuzu ngokushintshashintsha okuphezulu ingcindezi emaphakathi.
Izinzuzo zayo eziyinhloko yilezi: kususa amaphutha abangelwa uchungechunge lwabasebenzi njengokusebenza ngesandla kodokotela, ukufunda komuntu iso, ukwahlulela okuzwakalayo, isivinini se-deflation, njll .; ukuphindeka nokungaguquguquki kungcono; ukuzwela kuphezulu, futhi kunganqunywa ngokunembile ku- ± 1mmHg; amapharamitha Ukuhlelwa kwawo kuthathwe emiphumeleni yomtholampilo, okuyinjongo ethile. Kepha kudinga ukukhonjiswa ukuthi kusukela kumgomo wokulinganisa, izindlela ezimbili zokulinganisa ezingaqondile azinankinga yokuthi iyiphi enembe kakhudlwana.
Umehluko phakathi kwe-sphygmomanometer yezokwelapha ne-sphygmomanometer yasendlini
Ngokwamazinga embonini kanye nemithethonqubo yokuqinisekisa i-metrological kazwelonke, awukho umqondo wokwelashwa nokusetshenziswa kwekhaya. Kodwa-ke, ngokuya ngezici zezikhathi ezimbalwa zasendlini kunezikhathi zokwelashwa, futhi kusukela ekubhekeni kwezindleko, ukukhethwa kwe- "sensors pressure" zezinto ezisemqoka ukukala ukucindezelwa kwegazi kune Kunokwehluka, kepha kukhona izidingo eziyisisekelo kakhulu "zezinkulungwane eziyishumi izikhathi ”ukuhlolwa okuphindaphindwayo. Uma nje ukunemba kwamapharamitha wokulinganisa we-sphygmomanometer ye-elekthronikhi kuhlangabezana nezidingo ngemuva kovivinyo "lokuphindaphindwa eziyizinkulungwane eziyishumi", kulungile.
Thatha i-sphygmomanometer ejwayelekile yasendlini njengesibonelo sokuhlaziywa. Phakathi kwazo, kukalwa kathathu ngosuku ekuseni nakusihlwa, izikhathi eziyisithupha ngosuku, futhi inani lezilinganiso eziyi-10,950 zenziwa izinsuku ezingama-365 ngonyaka. Ngokuya ngezimfuneko zokuhlolwa eziphindaphindwe ngenhla "zezikhathi eziyi-10,000", empeleni isondele eminyakeni emihlanu yesikhathi sokusebenzisa esilingisiwe. Ukuhlolwa kwekhwalithi yomkhiqizo.
Izici ezithinta ukunemba kwemiphumela yokulinganisa komqapha we-elekthronikhi yegazi
I-sphygmomanometer kagesi yabakhiqizi abahlukene, futhi isoftware yayo ihluke ngokuphelele, futhi ukuzinza nokunemba kwemiphumela yokulinganisa nakho kuhluke kakhulu;
Izinzwa zengcindezi ezisetshenziswe ekukhiqizeni okuhlukile zihlukile, futhi izinkomba zokusebenza nazo zizohluka, okuholele ekunembeni okuhlukile, ukuzinza nempilo;
Kuyindlela engafanele yokusebenzisa. Indlela elungile yokusebenzisa iwukugcina ikhafu (noma ibhande lesandla, iringi) isezingeni elifanayo nenhliziyo ngesikhathi sokuhlolwa, futhi unake nezinto ezifana nokuzindla nokuzinza ngokomzwelo;
Isikhathi sokulinganiswa kwengcindezi yegazi elingaguquki nsuku zonke sehlukile, futhi inani lokulinganisa kwengcindezi yegazi nalo lihlukile. Inani lesikhathi sokulinganisa ntambama, isikhathi sokulinganisa kusihlwa nesikhathi sokulinganisa sasekuseni kuzohluka. Le mboni incoma ukuthi umfutho wegazi ulinganiswe ngesikhathi esinqunyiwe njalo ekuseni.
Izici ezithinta impilo yesevisi yabaqaphi be-elekthronikhi yegazi
Izici zokwelula impilo yensizakalo ye-sphygmomanometer ye-elekthronikhi nokwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo zicatshangelwa ikakhulu kulezi zici ezilandelayo:
Impilo yokwakhiwa kwe-sphygmomanometer ejwayelekile ye-elektroniki iyiminyaka emi-5, enganwetshwa iye eminyakeni eyi-8-10 ngokuya ngokusetshenziswa kwayo.
Ukunweba impilo yesevisi, izinzwa zengcindezi ezinamapharamitha aphezulu wokusebenza zingakhethwa;
Indlela yokusebenzisa kanye nezinga lokulondolozwa nakho kuzothinta impilo yesevisi. Isibonelo, ungafaki i-sphygmomanometer ngaphansi kokushisa okuphezulu, umswakama noma ukukhanya kwelanga; ungagezi ikepisi ngamanzi noma umanzise isihlakala somzimba noma umzimba; gwema ukuyisebenzisa. Izinto ezinzima zibhoboza ikhafu; ungahlukanisi umshini ngaphandle kwemvume; ungasuli umzimba ngezinto eziguquguqukayo;
Ikhwalithi yezinzwa, okokuxhumana okuphathelene nomngcele, kanye nohlelo lokuphakelwa kwamandla nakho kunquma ngokungaqondile impilo yensizakalo yomqaphi wegazi.